Sangany amin’ireo media belarosiàna, namafa lahatsoratra an-tambajotra mba hiarovany ny mpiasa · Global Voices teny Malagasy
Tranonkalam-baovao tadiavin'ny Minisitry ny Atitany Belarosiàna hatao hoe "mahery fihetsika"
Voadika ny 30 Jona 2021 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, English, Español, বাংলা, Ελληνικά, English
Fangon'ny TUT.BY, CC BY-SA 4.0, tao amin'ny Wikimedia Commons. Narafitr'i Tanya Lokot.
Voalaza fa nalàn'ny Tut.by, tranonkalam-baovao tsy miankina ary malaza be ao Belarosia, daholo ireo lahatsorany teny anatin'ny media sôsialy tato anatin'ny 18 volana farany mba ho fiarovana ny mpiasany sy ireo mpamaky amin'ny famoretana tsy miato ataon'ny fanjakana an'ireo media tsy miankina.
Nesorin‘ny toniandahatsoratry ny Tut.by daholo ireo votoaty virtoaly navoaka tamin'ny ankamaroan'ireo fantsom-baovaony tety anaty media sôsialy tamin'ny 2020 sy ny tapany voalohany ho an'ny 2021. Nolazain'izy ireo fa mbola ananany ny tahiry saingy “nafenina” fotsiny izy ireny “tsy ho hitan'ny daholobe”.
Mandalo fanadihadiana ankehitriny ny Tut.by taorian'ilay fitakian'ireo manampahefana ao amin'ny ministeran'ny atitany, tamin'ny tapaky ny volana Jona, mba hanondroana ilay vavahadim-baovao sy ireo kaontiny ety anaty media sôsialy ho “mahery fihetsika”. Voalahatra ho ny 24 Jona ny fihainoana voalohany tao amin'ny fitsaràna tao Minsk, saingy nahemotra ho amin'ny fotoana manaraka.
Nesorin'ny efitrano famoaham-baovao ihany koa ny fanamarinam-pidirana mba tsy ho hita ao amin'ireo fantsony Telegram sy hahafahana manova anarana malaky an'ilay fantsona raha sendra lazain'ny fitsaràna ao Belarosia amin'ny fomba ofisialy tokoa ho “mahery fihetsika” ny famoaham-baovaony sy ny fantsony Telegram. “Tsy ho azonay atao intsony izany raha miandry ny fivoahan'ny didim-pitsarana, ka nanapaka hevitra ny hiomana mialoha izahay”, hoy ireo mpamoaka lahatsoratra tao anaty lahatsoratra Telegram iray.
Na ohatra aza ka manahy ireo mpanjohy hoe nisy nijirika na lasa tantanin'ny manampahefana ilay fantsona, izay manana mpamandrika maherin'ny antsasaka tapitrisa, nanome toky ny mpamaky azy ny Tut.by tamin'ny fanamafisana ho an'ny Fikambanan'ireo Mpanao Gazety Belarosiàna fa mbola eo am-pelatanan-dry zareo ilay fantsona.
Nanamafy tamin'ny Fikambanan'ireo Mpanao Gazety Belarosiàna ireo toniandahatsoratry ny Tut.by fa ny vavahadin'ny fantsona Telegram @tutby_official dia mbola eo ambany fifehezan'ilay efitrano famoaham-baovao. Mangataka anareo tsy ho be ahiahy ireo mpiaramiasa, tsy misy voajirika. Mbola miaraka amintsika ny Tut.by, ary isika miaraka amin'ny Tut.by!
Ny 18 May 2021, voabahana tao Belarosia ny tranonkala renin'ny Tut.by, ary nogiazana ny volan'ilay fikambanana tany amin'ny banky taorian'ny fiampangana azy ho nanao hosotra tamin'ny hetra. Nisy ny fanadihadiana mahakasika heloka bevava natao an'ireo mpitantana an'ilay famoaham-baovao, ka mpiasa 15 no voatazona. Maro tamin'ireo no mbola any am-ponja, isan'izany ny lehiben'ny mpamoaka lahatsoratra, Marina Zolotova.
Ny Desambra 2020, nosintonin'ireo manampahaefana belarosiàna ny lisansa fanaovangazetin'ny Tut.by taorian'ny fampitandremana azon'ilay vavahadim-baovao noho ny fandrakofany tsy miato ny famoretana ataon'ny fanjakana an'ireo hetsipanoherana nipoaka taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Aogositra 2020.
Tamin'ny May, maromaro ireo fanitsiana nankatoavin'ireo manampahefana Bielorosiàna, natao tamin'ireo lalàna efa misy sy mifehy ny asa fanaovana gazety, ny fitaterana vaovao momba ireo hetsipanoherana ary ny andraikitra sivilin'ireo mpanao gazety. Nokianin'i Teresa Ribeiro, solontenan'ny OSCE misahana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ireo fanitsiana ireo, izay nilaza fa ireo lalàna nankatoavina vao haingana dia “mifanohitra tanteraka amin'ny fenitra iraisampirenena momba ny zon'olombelona amin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety”.
Tao anatin'ny Tondron'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety 2021 navoakan'ny RSF, nofaritany ho ny firenena ao Eorôpa tena mampididoza indrindra ho an'ny mpanao gazety i Belarosia” ary nolazainy fa “nizaka famoretana tsy mbola nisy toa azy ireo mpanao gazety manandrana ny hitatitra momba ireo hetsipanoherana goavana eny an-dalambe”. Araka ny nambaran'ny Fikambanan'ireo Mpanao Gazety ao Belarosia, 25 ireo mpanangom-baovao mbola any am-ponja amin'izao fotoana izao, ary 77 no fitambaran'ireo fisamborana na fihazonana hatramin'ny nanombohan'ny taona 2021.